Suuq Gelin Masuul Miyaa La Abaal Mariyaa? | Martech Zone
Suuq Gelin Masuul Miyaa La Abaal Mariyaa?
Tuesday, May 29, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sanado kahor, Seth Godin qalinka ku duugay oraahda caanka ah Suuqgeynta Oggolaanshaha oo ay ku qortay buug cajiib ah. Waxaan hayaa nuqul autografhed ah oo aan jeclahay oo waxaan iibsaday buug kasta tan iyo tan. Suuqgeynta ku saleysan ogolaanshuhu waa mid cajiib ah maxaa yeelay macmiilkaagu wuxuu ku siiyay rukhsad ay ugu suuq geynayaan - heshiis fiican.
Hadda waan soo qaatay Dhaqaalaha qotada dheer: Hantida bulshooyinka iyo mustaqbalka waara by Bill McKibben amarka saaxiib wanaagsan Pat Coyle. Waxaan akhriyay cutubka koowaad oo waan xiisay. Buuggu wuxuu u jiheystaa dhinaca 'Badbaadinta Dunida' ee ganacsiga laakiin wuxuu bixiyaa aragti ka duwan taas oo aan ku faraxsanahay.
Anigu si fudud uma ihi nooca 'cagaarka dambiile'. Runtii waxaan ahay qof aaminsana hanti-wadaagga iyo xorriyadda. Haddii aad rabto inaad waddo gaari SUV ah oo gubaya tan gaas ah, taasi waa xuquuqdaada. Haddii aad rabto inaad masuuliyad darro noqoto oo aad dunida baabiiso, ka dib horay u soco oo iskuday. Dabcan sidoo kale waxaan aaminsanahay dheelitirka awoodda iyo dimuqraadiyadda inaan isku dayo inaan ku joojiyo. Intooda badan, waxaan aaminsanahay la xisaabtanka shaqsiyeed ee ficillada qofka one's oo ii keenaya suuqgeyn mas'uul ah.
Halkan Indiana, waxay siin doonaan amaah guri qof kasta oo ficil ah. In kasta oo guryuhu yihiin kuwo la awoodi karo, Indiana waxay leedahay mid ka mid ah heerarka la-wareegidda guryaha ee ugu dhaqsaha badan waddanka. Aaway la xisaabtankii dadka guryahaas ka iibinaya dad ay garanayaan inaysan awoodin? Haddii dhaqtarku u qoro dadka xanuunka qabatinka qabatinka u leh balwadda, waxaan diyaar u noqon lahayn inaan ku ridno xabsiga Laakiin suuq geyne aan mas'uuliyad lahayn oo ka iibinaya wax soo saarka ama adeegyada dadka aan u baahnayn kaliya dhabarka lama salaaxi karo, waxaa lagu abaalmariyaa dhaqaale ahaan. Iibso waxbadan si ka badan… taasi waa halhayska wadista!
Waxaan kusoo laaban doonaa qoraalkayga ku saabsan la xisaabtanka shaqsiyeed daqiiqad… Waxaan aaminsanahay inaan masuul ka nahay ficilkeena. Waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan u baahanahay inaan cadaadis ku saarno kuwa isku dayaya inay fara-geliyaan ama adeegsadaan baahiyaha iyo rabitaanka dadka. Suuq geyn mas'uul ah waa inuu guuleystaa. Suuq geyn mas'uul ah macnaheedu waa suuqgeynta wax soo saar ama adeeg aad ogtahay in qof u baahan yahay qof u baahan. Suuq galiyaal mas'uul ah ayaa macaamiisha u sameeya wanaag, iyaga oo u ilaaliya waqti ama lacag…. kama iibin iyaga wax uun ujeedadooda darteed.
Cutubka koowaad ee dhaqaalaha qotoda dheer, wuxuu caqabad ku yahay fikradda ah 'wax badan ayaa ka wanaagsan' - dhaqan ay labada dowladood iyo suuqleydu riixaan. Si joogto ah ayaa lagugu dhiirigelinayaa inaad iibsato toy-ga cusub, baabuurka cusub, guriga cusub ume cun, cun, cun oo waad ku farxi doontaa. Laakiin ma nihin kuwa faraxsan. Faahfaahin kama bixin doono arinkaan - waa waxa igu jira Manifesto Farxad. Waxaan rajaynayaa markaan akhriyay buugga inuusan qaylin 'cagaar' laakiin uu riixo bulshooyinka yar-yar ee naftooda la xisaabtama.
Jooji iibinta wax badan iyo in ka badan. Iibi wax badan adoo raadinaya dadka aad taqaanid ee u baahan! Haddii himiladaada wax soo iibintu ay tahay uun inaad xawaarahaaga xajiso, malaha inaadan ka iibinayn alaabadaada dadkii badnaa - ama laga yaabee inaadan haysan wax soo saar wanaagsan ama adeeg aad ku bilowdo.
Tags: Bill McKibbendhaqaalaha qoto dheerkool kooli
.NET Platform Blogging
La Raadinayo: Teknolojiyadda Extraordinaire
May 30, 2007 at 8: 13 AM
Fikirkaygu wuxuu had iyo jeer ahaa inaadan dhab iibinayn, waxaad adeeg u fidineysaa qof u baahan. Si kasta oo ay u weynaadaan ama u yar yihiin, marwalba waad guuleysan doontaa mustaqbalka fog (had iyo jeer ma ahan waqtiga gaaban) haddii aad maanka ku hayso inaadan "iibin", laakiin "u adeegto". Haddii, dabcan, magacaagu uu yahay RonCo oo aad haysato xoogaa toon ah / basbaas jajab ah / laakiin waxaa jira fikrad nooc kale ah, markaa waxaad ku guuleysan doontaa dadka aniga oo kale ah ee jecel aaladaha oo aan seexan karin sidaa darteed waxaa lagu jiiday iibsashada waxyaabo ayan u baahnayn. Si aan ugu adeegno, taasi runtii waa waajibaadkeenna Dunidan, miyaanay ahayn?
May 30, 2007 at 9: 03 PM
Si fiican ayuu yidhi Jules. Waxaan u maleynayaa waajibaadkayagu inay noqdaan inaan u adeegno. Kaliya waxaan isku dayayaa inaan ogaado qofka loo adeegayo iyo waxa loogu adeegayo.